EXCEL TABLE FORMAT - EXCEL - 2019
Fitsipiky ny tabilao fanoratana ao amin'ny Microsoft Excel
Ny iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra rehefa miasa amin'ny Excel dia formata. Ny fanampiana azy dia tsy ny endriky ny latabatra ihany no natao, fa koa ny famantarana ny fandaharanasa fandaharam-potoana hita ao anaty sela na faritra iray manokana. Raha tsy mahatakatra ny fomba fiasan'ity fitaovana ity ianao, dia tsy afaka manapaka tsara an'io fandaharana io. Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany ny format-in ao Excel ary ny fomba tokony hampiasana azy ireo.
lesona: Ahoana no hamolavolana tabilao amin'ny Microsoft Word
Ny famolavolana dia fomba fiasa manontolo amin'ny fanitsiana ny votoaty hita amin'ny tabilao sy ny angon-drakitra. Ity faritra ity dia ahitana ny fanovana ny isa maromaro: ny habe, ny karazana sy ny lokon'ny fonosana, ny habeny, ny fenitra, ny sisin-tany, ny format, ny tarehimarika ary ny maro hafa. Hiresaka bebe kokoa momba ireo trano ireo eto ambany.
Azonao atao ny mampihatra ny formata automatique ho an'ny tahiry rehetra. Ny fandaharam-pampianarana dia hamolavola ny faritra voatondro ho latabatra ary omena azy ireo ny toetra maromaro efa voafaritra.
Misafidiana sela maromaro na latabatra.
Ny maha-eo amin'ny takelaka "Home" tsindrio ny bokotra "Fahaefatra toy ny latabatra". Ity bokotra ity dia napetraka eo amin'ny tadiny ao amin'ny fitaovana. "Styles". Aorian'izany dia misy lisitry ny karazam-barotra maro misy fananana voafidy, izay azon'ilay mpampiasa misafidy araka ny fahamendrehany. Tsindrio fotsiny ny safidy mety.
Avy eo dia misy varavarankely iray misokatra izay ilainao hanamafisana ny fahamarinan'ny kômtin-tsehatra. Raha fantatrao fa efa niditra moramora izy ireo, dia afaka manao fanovana avy hatrany ianao. Zava-dehibe ny mihaino tsara ny mari-pamantarana. "Loha misy lohateny". Raha misy lohateny eo amin'ny latabatrao (ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia), dia tokony hisy marika famantarana eo anoloan'io parameter io. Raha tsy izany dia tokony esorina izany. Rehefa vita ny sehatra rehetra, tsindrio ny bokotra. "OK".
Aorian'izany, ny latabatra dia hanana ny format voafidy. Azonao atao anefa ny manova azy amin'ny fitaovana fampiasana marina kokoa.
Ny mpampiasa dia tsy mahafa-po afa-tsy amin'ny toetra maromaro izay aseho amin'ny auto-formatat. Amin'ity tranga ity, azo atao ny manamboatra ny latabatra amin'ny alalan'ny fitaovana manokana.
Afaka miditra amin'ny tabilao fanatontosana ianao, izany hoe manova ny bika aman'endriny, amin'ny alàlan'ny sehatra ifanakalozana na amin'ny alalan'ny fanatanterahana asa amin'ny fampiasana fitaovana eo amin'ny tadiny.
Mba handehanana amin'ny fahafahana mamorona amin'ny alalan'ny menu menu context, mila manao ireto dingana manaraka ireto ianao.
Safidio ny efi-tranokely na ny latabatra izay tianay hovaina. Tsindrio eo amin'ny bokotra ankavanana izany. Nisokatra ny sakafo mifandraika. Mifidiana zavatra ao anatiny "Ny cellule format ...".
Aorian'izany, misy varavaran-drakitra fanalahidy iray misokatra izay ahafahanao mamokatra karazana format maromaro.
Ny fitaovana fampiasana eo amin'ny kasety dia eo amin'ny tabilao samihafa, fa ny ankamaroan'izy ireo dia ao amin'ny tablette "Home". Mba hampiasana azy ireo dia mila mifidy ny singa mifandraika ao amin'ny taratasy, ary tsindrio avy eo ny bokotra ny fitaovana eo amin'ny tadiny.
Ny karazana format manan-danja indrindra dia ny format format. Izany dia noho ny tsy mamaritra ny endrik'ilay fampahalalam-baovao miseho rehefa miteny amin'ny fandaharana ny fomba handraisana azy. Excel dia somary hafa ihany ny fanodinana ny tarehintsoratra, tarehimarika, vola, vola ary daty sy ora. Azonao atao ny mamorona ny karazan-drakitra amin'ny sehatra voafantina amin'ny alàlan'ny sehatry ny fifandraisana sy ny fitaovana eo amin'ny tadidy.
Raha manokatra varavarankely ianao "Zana-format" Amin'ny alalan'ny menu context, ny tranokala ilaina dia hita ao amin'ny tablette "Number" ao amin'ny vondrona parlemanta "Formats Number". Raha ny marina, ity no hany tokana eto amin'ity tabilao ity. Eto ianao dia afaka mifidy iray amin'ny format format:
Rehefa vita ny fisafidianana dia mila manindry ny bokotra. "OK".
Ankoatra izany, misy ny fametrahana fanampiny ho an'ny mari-pamantarana sasany. Ohatra, ho an'ny endri-tsoratra maromaro ao amin'ny faritra havanana amin'ny varavarankely, dia azonao atao ny mametraka ny hamaroan'ny toerana maromaro ho an'ny tarehimarika maromaro ary ny hampisehoana ny sasantsasany eo amin'ny tarehimarika.
Ho an'ny parameter "Date" Azo atao ny mametraka ny endriky ny daty hivoaka amin'ny efijery (amin'ny isa fotsiny, ny isa sy ny anaran'ny volana, sns.).
Misy ny fanovana mitovy ho an'ny format "Time".
Raha mifidy zavatra ianao "Ny endrika rehetra", dia haseho amin'ny lisitra iray ny subtype rehetra amin'ny endri-tsoratra rehetra.
Raha te-hamolavolana rakitra amin'ny alalan'ny kasety ianao, dia midira ao amin'ny takelaka "Home", mila tsindrio ny lisitra fidirana hita ao amin'ny fitaovana "Number". Aorian'izany, nozaraina ny lisitry ny endrika lehibe. Raha ny marina, dia mbola tsy voatazona amin'ny antsipiriany izy io raha oharina amin'ny dikan-teny voalaza teo aloha.
Na izany aza, raha te-hovidiana araka ny tokony ho izy ianao, dia ao anatin'ity lisitra ity dia mila tsindrio ny singa "Endrika hafa misy tarehimarika ...". Hisy varavarankely efajamba efa hainao. "Zana-format" miaraka amin'ny lisitra feno amin'ny fanovana.
lesona: Ahoana ny fomba hanovana ny format cell ao amin'ny Excel
Boky fitaovana iray manontolo no aseho eo amin'ny tabilao. "Fanitsiana" eo amin'ny varavarankely "Zana-format".
Amin'ny fametrahanao ny vorona eo akaikin'ilay mari-pamantarana mifandraika amin'izany, dia afaka mampifandray ireo sela voafantina ianao, manamboatra karazan-tsindrim-peo ary mamindra ilay tononkalo amin'ny teny raha tsy tafiditra ao anatin'ny sisin'ny sela izany.
Ankoatra izany, ao amin'ny tabilao iray ihany, dia azonao atao ny mametraka ilay lahatsoratra ao anaty efi-tranonkala horizontaly sy avoakany.
Ao amin'ny parameter "Orientation" mametraka ny mari-pamantarana ao amin'ny efi-takelajela.
Kitapo fitaovana "Fanitsiana" Misy ihany koa ny loko ao amin'ny tabilao "Home". Misy endri-javatra mitovy eo amin'ny varavarankely "Zana-format", fa amin'ny dikan-teny miverimberina kokoa.
Ao amin'ny tab "Font" Ny famoronana varavarankely dia manana fahafahana hampifanitsy ny endriky ny faritra voafaritra. Ireo endri-javatra ireo dia ahitana ny fanovana ireo fepetra manaraka:
fanovana (famandrihana, soratra etsy ambony, strikethrough).
Ny kapila koa dia manana fitaovana miaraka amin'ny fahaiza-manao tahaka izany, izay antsoina ihany koa "Font".
Ao amin'ny tab "Border" Ny endrika fanovozam-pejy dia afaka mampifanitsy ny karazan-tsipika sy ny lokony. Io dia mamaritra avy hatrany ny sisintany: anatiny na ivelany. Azonao atao aza ny manala ny sisintany, na dia efa misy aza ao amin'ny latabatra.
Saingy eo amin'ny kasety dia tsy misy fitaovana fisoratana ho an'ny fametrahana ny sisintany. Ho an'ity fikasana ity, eo amin'ny tabilao "Home" bokotra iray ihany no asongadina, izay hita ao anatin'ny vondrona fitaovana "Font".
Ao amin'ny tab "Famenoana" Azo ampiasaina ny varavarankely fanovana mba hampifanaraka ny loko misy ny cellules. Ankoatra izany, afaka mametraka lamina ianao.
Ao amin'ny loko, ary koa ho an'ny fanao teo aloha, bokotra iray monja no nofidina ho an'ny fills. Ao amin'ny fitaovana ihany koa izy io. "Font".
Raha toa ka tsy ampy ny loko natokana ho anao ary te hanampy ny fanoratana ny latabatra ianao, dia tokony handeha ianao "Loko hafa ...".
Aorian'izany, misy varavarankely iray misokatra, natao hamaritana ny lokony sy ny lokony.
Ao Excel, na ny fiarovana aza dia anisan'ny sehatry ny formata. Ao amin'ny varavarankely "Zana-format" Misy tabilao miaraka amin'io anarana io. Ao anatin'izany dia azonao atao ny manondro raha hiaro ny sehatra voafantina na tsia, raha misy ny fanakanana ilay taratasy. Azonao atao koa ny manafoana formulas miafina.
Eo amin'ny totozy, ny asany dia azo jerena rehefa tsindrio ny bokotra. "Endrika"izay hita ao amin'ny tablette "Home" ao anaty fitaovana "Ny cellules". Araka ny hitanao dia misy lisitra iray miseho izay misy vondrona voafaritra. "Fiarovana". Ary eto dia tsy vitanao ny manamboatra ny fitondran-tenan'ny sela amin'ny trosan'ny fanakanana, toy ny ao anaty fikandrana, fa alaivo avy hatrany ny teboka amin'ny tsindrio ilay singa "Arovy ny taratasy ...". Noho izany dia anisan'ireo tranga tsy fahita firy ireo ny vondrona misy ny safidy formata eo amin'ny kasety dia manana tolotra betsaka kokoa noho ilay tabilao mitovy eo amin'ny varavarankely. "Zana-format".
lesona: Ahoana ny fiarovana ny sela amin'ny fanovana ao Excel
Araka ny hitanao, Excel dia manana tolotra faran'izay lehibe ho an'ny latabatra fanoratana. Amin'io tranga io, dia afaka mampiasa karazana safidy maro miaraka amin'ny properties ianao. Azonao atao ihany koa ny mampifanaraka kokoa ny fampiasana ny fitaovana rehetra ao anaty varavarankely "Zana-format" ary amin'ny kasety. Amin'ny fisehoan-javatra tsy fahita firy, ny varavarankely fampisehoana dia manolotra safidy lehibe kokoa amin'ny fanovana ny format fa tsy amin'ny kasety.
https://termotools.com mg.termotools.com © Excel 2019